Bengkulu, oo taariikh ahaan loo yaqaan Bencoolen ama (Ingiriiska Bencoolen) , waa mid ka mid ah gobollada Indonesia, waxayna ku taal xeebta koonfur galbeed ee Sumatra. Waxaa la aasaasay 18kii Nofembar 1968 iyada oo la kala soocay degaankii hore ee Bengkulu oo ku yaalay gobolka Sumatra (Sumatra Selatan) sida ku cad Sharciga Lambarka. 9 ee 1967 waxaana lagu aqoonsaday Xeerka Dawladda lambarkiisa 20-aad ee 1968. Baaxada 19,813 km2, waxay xuduud la leedahay Gobolka Sumatra (Sumatra Barat) oo waqooyiga ka xiga, Jambi oo waqooyi-bari ka xiga, Lampung oo koonfur bari ka xiga, Koonfurta Sumatra (Sumatra Selatan) oo ka xigta bari, iyo Badweynta Hindiya oo ka xigta waqooyi-galbeed, koonfur, koonfur-galbeed, iyo galbeedka.
Bengkulu waa gobolka 25aad ee ugu ballaaran gobolada Indonesia; waxaa loo qaybiyaa sagaal xeerar iyo magaalada Bengkulu oo ah caasimadda iyo magaalada ugu weyn.
Bengkulu sidoo kale waa gobolka 26aad ee ugu weyn marka loo eego dadweynaha ku nool Indonesia. waxaa magaalada ku nool 1,715,518 oo qof. Sida laga soo xigtay sii-deynta (Tirakoobka Badan Pusat), gobolka wuxuu ku jiraa kow iyo toban heerka sare ee Horumarka Aadanaha ee gobollada, oo leh dhibco qiyaastii 0.744 sanadka 2013. Ilaa 2014, gobolku wuxuu ku jiraa 28th ugu sarreeya wax soo saarka gudaha iyo 20aad ee ugu sareeya nolol-maalmeedka, 70.35 sano .
Gobolka Bengkulu wuxuu ka kooban yahay oo keliya dhulka koonfur galbeed Sumatra, laakiin sidoo kale waxaa ka mid ah Jasiirada Mega iyo Jasiirada Enggano ee Badweynta Hindiya. Bengkulu waxay leedahay 525 kiiloomitir oo xeeb ah oo ku taalla Badweynta Hindiya dhinaca galbeed, laga bilaabo Dusun Baru Pelokan oo ku yaala Muko-Muko Regency ilaa Budhcinta Nasal ee Kaur Regency. Bengkulu waxay hoy u tahay Khayraad badan oo dabiici ah sida dhuxusha iyo dahabka.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Bengkulu&oldid=201489"
Last edited on 28 May 2020, at 21:49
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 28 May 2020, marka ee eheed 21:49.